2 199 online! | Sidvisningar idag: 151 615 | Igår: 164 011 |
UN na-aghọ aghụghọ mmeko e mma ụnyaahụ
Photo: Free oge.
Ụnyaahụ e mma Immigration mmeko nke United Nations nke, ụkpụrụ, na-emeghe ha ala maka free mbata na ọpụpụ. Ma dị ka Nobel oriri ike ụnyaahụ okụrede mbụk oké UN nkwekọrịta na media mkpọtụ.
A ọhụụ nke ikpeazụ mkpụrụ nke osisi nke ihe ọmụma
Nke a nwere ike ụda gbarụọ, ma nke a bụ ike Contemporary Time The agwa anyị na-agụ banyere na ọhụụ a na Bible, na ga-eme ka anyị ikike na-atụgharị Time!
Kpọgide, edisana ya!
Reader Mail site David B Obi abụọ adịghị ya, ìgwè na-eme na-eti mkpu: Kpọgide, edisana!, Na-eso ụzọ Jizọs na ihe Jizọs na-anọchi anya. Ha ga-ahụ ida ya ihe mere na ha adịghị aghọta na ha na-agbapụ onwe-ha na ụkwụ.
Islam agbasa na enyemaka nke Swedish Church
Christer Åberg na-aga ebe ụfọdụ Nde ozi ọma. E nwere doro anya na anyị na-ebi n'ụbọchị ikpeazụ mgbe ị na-ụfọdụ n'ime ndị a ozi ọma.
Site Holger Nilsson
Na n'elu okwu, otu onye nwere ike na-akpọ ndị niile na-na-eche na oge dị nso na na ị na-na-esi nke ya.
The atọ eluigwe na Bible
Ke akpa amaokwu nke Bible ọ na-ekwu odide mbụ na Chineke kere eluigwe na ụwa. Chineke kere eluigwe ọzọ.
Sweden ego-free n'ime atọ afọ ise - Bible mezuo amụma
"Sweden ga-eleghị anya ndị 'cashless' n'ime atọ afọ ise", kwuru, sị Vice Governor Cecilia Skingsley na a ichekwa ego na bank ogbako na London.
Jesus-abịa na ga-abịa ọzọ
Anyị na-eche Jizọs nke na-abịa, ọ bụghị nke mbụ. Na a mbata ga-ruo ogologo oge. Ma mgbe Jizọs bịara azụ udọ, ọ ga-enwe na ihe na ọ bụghị oge mbụ na ọ bịara. Ị maara ihe ọ pụrụ ịbụ ihe ọ bụla?
Ozugbo-azọpụta, mgbe zọpụta?
Kalvanistpstorn Pastor John Loopez e nyere site na Chineke na-ahụ otú ụgha ozizi a bụ.
Ala Ọma Jijiji na Alaska - Jesus amụma emezu
Alaska e kụrụ abụọ dị nnọọ ike ala ọma jijiji. Aga nke ọma mgbe o kwuru, a ọdachi mberede. Jesus kwuo okwu nke nnukwu ala ọma jijiji ga-eme. Ka anyị kpee ekpere maka mgbe kụrụ.
Amụma nke owuwe na Ukwu Mkpagbu
The Bible na-ebu amụma na oge na-owuwe-ebe na-azoputa na-aga n'ime-ulo mgbe mkpagbu ahụ na-aga n'ihu na Earth.
Ọ na-emekwa ụfọdụ na a chandelier
Amanda Liberty na-emekwa ụfọdụ na a chandelier na ọ "na hụrụ n'anya na-susuo na cuddle na."
Christian TV ọwa na Sweden
E nwere ọtụtụ ezi Swedish Christian TV ọwa na Sweden. Ma na-eje ije na satellite, USB na Web! Ọ depụtara niile ọwa.
Ọ dịghị ka na ọchịchịrị
Reader Mail site Sigvard Sword
Na m outreach ozi Chineke ahụ, ọ dịla banyere njọ ọnọdụ ebe ma ahụ m na mkpụrụ obi m nọ n'ihe ize ndụ. Ọnwụ egwu, si neo-Nazi n'ihi na m guzoro na zoro gbara ọsọ ndụ, dị nnọọ nso na eri na sexkriminalitetens ọchịchịrị site nlekota ikpe, besvärjd na aka ime mmụọ duel nke occultists.
69 afọ chọrọ ịgbanwe afọ 49
The 69-afọ Emile Ratelband na Netherlands chọrọ inwe ha iwu afọ Ike nke 49 afọ.
"Jesus Christ zọpụta m site na afọ 27 nke nwoke idina nwoke"
David siri ike na-agba akaebe nke otú o malitere zọpụta na-azọpụta site na Jesus nke afọ 27 nke nwoke idina nwoke. Swedish ederede.
- My aha ya bụ David, m 44 afọ, na nke a bụ a na-agba akaebe nke otú Jizọs zọpụta m site na iri abụọ na asaa afọ nke nwoke idina nwoke. M na-ekwu nke ịhụnanya.
Troendedöparna ọkụ, mmiri riri na isi
Ọtụtụ ndị bụ ndị na-kpagburu tụrụ mkpọrọ ma gbuo ndị rụworo Akwukwọ Nsọ kwere ekwe-baptism site n'imikpu ná mmiri.
Baptism: Olee ebe, mgbe na otú
Lee, m na-enye gị ụfọdụ doro anya Scriptures na baptism e mere, mgbe ọ na-eme na otú.
Vecka 50, tisdag 11 december 2018 kl. 10:23
Jesus söker: Daniel, Daniela!
Bụ Chineke nke Bible ahụ dị ka Koran Chineke?
"Ndị na-ekwu na ha na-ahụ n'anya, nsọpụrụ na-efe Chineke, na-adịghị n'ezie na ha na-adịghị n'anya, nsọpụrụ na ofufe Jesus."
Erik S: FN:s förrädiska pakt godkändes igår
Katrina: FN:s förrädiska pakt godkändes igår
AnnMarie: En vision om den sista frukten av kunskapens träd
Bertil Rosenius: FN:s förrädiska pakt godkändes igår
David B: FN:s förrädiska pakt godkändes igår
Steven: FN:s förrädiska pakt godkändes igår
Nils: En vision om den sista frukten av kunskapens träd
Leif: En vision om den sista frukten av kunskapens träd
Lenny: En vision om den sista frukten av kunskapens träd
Bertil Rosenius: Domedagsmänniskor
Bengt: Islam sprider ut sig med hjälp av Svenska kyrkan
Thomas: 70 nationer är inbjudna till invigning av altaret till det tredje templet
Leif: Islam sprider ut sig med hjälp av Svenska kyrkan
Roger T. W.: En vision om den sista frukten av kunskapens träd
Katrina: Islam sprider ut sig med hjälp av Svenska kyrkan
Ọ lụrụ hologramụ Hatsune Miku
Akihiko Kondo ejide a popet version of hologramụ Hatsune Miku onye ọ lụrụ. Image Source: Facebook.
A 35-afọ nwoke na Japan ka lụrụ di na nwunye a hologrom. Agbamakwụkwọ na-eri mmadụ 160,000 okpueze. A nwa bebi na-anọchite anya na nke nne na kọmputa usoro.
Eluigwe TV7 nsọ na Uppsala
TV na-emeputa Ruben Agnarsson, nchoputa na president Martti Ojares, ọwa njikwa Daniela Persin na Christer Åberg.
A kpọrọ m na Christian telivishọn Eluigwe TV7 si studio oghere Uppsala.
Jesus Mmaji ụwa-akụkọ ihe mere eme mmeri
Jesus Mmaji ụwa-akụkọ ihe mere eme mmeri, onyinye Chineke ka mmadụ niile nke ụwa. Na Jizọs Kraịst mere site n'aka-Ya Usio-Isop bụ na-enwetụbeghị ụdị Triple Victory! Ihe ịma aka bụ 3 dị iche iche ebe na Ọ n'iru Chineke bụ Onyeikpe, na n'iru: The spirit ụwa ga-emeri.
Ewepụghị bụ n'ala-esiteghị n'Akwụkwọ Nsọ
Ọ bụrụ na ị na-agụ Bible, ị pụrụ ịhụ na ụwa dị gburugburu. Ọ bụrụ na ụwa abụghị gburugburu mgbe Jizọs ga-emeela juputara hiere ụzọ mgbe ọ na-ekwu na ọ bụ abụọ ehihie na abalị na Earth, mgbe ọ eme n'ụlọ niile echekwara na-heaven.
New DVD! Ajụjụ na azịza banyere ọgwụgwụ oge na ya ihe
Ị ugbu a nwere ohere iso na-ọhụrụ a DVD banyere ọgwụgwụ oge.
UN chọrọ a ọchịchị zuru ụwa ọnụ n'ime afọ 12
Site Mikael Walfridsson
Wolfgang Ishinger: "Anyị na-ebi a oge ebe mba ụwa iji collapses ugbu a. Na nke a agụụ na-agba mbọ niile ịhụ ókè ha nwere ike ịga. E nwere mkpa maka a zuru ụwa ọnụ ọchịchị. "
Day gbara ajụjụ ọnụ Christer Åberg na agba izu megide chepụtara
Akwụkwọ akụkọ Day.
The akwụkwọ akụkọ The ụbọchị nwere site Jonathan Sverker gbara ajụjụ ọnụ m na ọtụtụ ndị ọzọ na-agba izu megide chepụtara na mere a siri ike isii peeji nke ogologo kọwakwuru isiokwu a.
Mbilite n'ọnwụ mbụ
Christer Åberg na Reine Jonsson okwu na-ekwu okwu banyere mbilite n'ọnwụ mbụ na Nässjö obodo redio.
Na-Kpụrụ ọrụ iji na-ada n'azụ na-agba egwú klas na yoga?
Banyere Ụdị, ha onwe ha ngosi dị ka nke a: "Bilda maka Church na Society, obere ụdị Ụdị, na n'oge gara aga na-akpọ ndị na-abụghị conformist izi mkpakọrịta, bụ otu n'ime Sweden iri ọmụmụ."
16 Bible amaokwu banyere anata Jesus maka nzọpụta
Lee, m na-depụta ọtụtụ amaokwu Baịbụl dị ka onye ọ bụla bụ ihe na-na-enweta Jesus. E nwere ihe ọzọ Akwụkwọ Nsọ banyere nke a na m gụnyere ebe a. Na niile nke amaokwu ndị a na-egosi na i kwesịrị anabata Jizọs!
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 457 468 791 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 052 bloggartiklar, 92 161 kommentarer och 60 403 bönämnen.